Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka hor yimid kala eryiddii Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ayaa warqad uu ku saxiixan yahay loogu ogolaaday Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka inuu shaqadiisa sii wadan karo. Guddoomiye Mursal ayaa warqaddiisa ku sheegay in, kadib markuu arkay warqaddii uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha, Cabdiwali Muuddey, ku kala diray Guddiga Maaliyadda, uu go’aansaday inuu Guddiga Maaliyadda u ogolaado inuu u shaqeeyo sidii caadiga ahayd ee uu u shaqeyn jiray.
Arrintan ayaa ka dhigan inuu Guddoomiye Mursal diiday kala eryidda Guddigaas, oo uu Guddoomiye Muuddey warqad ku soo saaray 28-kii bishii hore. Guddoomiyuhu waxa uu Guddiga Maaliyadda faray iney sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo shaqeeyaan Xisaab Xirka Miisaaniyadda 2017 iyo 2018, inta uusan dhamaan sanadkan. Mursal waxa uu sheegay inuu go’aankan qaatay, isaga oo cuskanaya sharciga, sida qodobbo ku qoran Dastuurka iyo Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka. Waxa uu Xukumadda u soojeediyey iney xushmeyso shaqada Guddiyada Golaha ee ah kor joogteynta iyo la xisaabtanka Xukumadda.
Warqaddaan waxaa, sida ku qoran, ay sharci ka dhigeysaa inuu Guddiga Maaliyaddu shaqeeyo, dibna u hor keeno Golaha War-bixintii Miisaaniyadda 2018-ka ee dhalisay khilaafka ku keentay Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha inuu qaato go’aankii uu sheegay inuu ku kala diray Guddiga Maaliyadda. War-bixintaas waxay eed maaliyadeed ku dhoobtay Wasaaradda Maaliyadda, oo uu Guddigu weydiinayo iney caddeyso halka ay ka baxday in ka badan $40 milyan.
Kulankii 29-aad ee Golaha, oo dhacay 24-kii bishii hore, ayaa Wasaaradda Maaliyadda lagu weydiiyey eedeymaha ku xusan war-bixinta, hase ahaatee Wasaaraddu waxay isku difaacday iney Guddiga Maaliyaddu siyaasadeeyeen war-bixintaas. Intaas kadib, Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Mahad Cabdalla Cawad, oo kulankaas shir-guddoominayey, ayaa xogta war-bixinta ku jirtay ka raaligaliyey Wasaaradda Maaliyadda, waxa uuna laala war-bixinta, taas oo ka carreysiisay Guddiga Maaliyadda.